Arra Taayyeen OPDOn akka Abbootii Gadaa Oromoo Karrayyuu ajjeesite ragaa bahe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsArra Taayyeen OPDOn akka Abbootii Gadaa Oromoo Karrayyuu ajjeesite ragaa bahe.
Ee Waatu Nu Duuba Jira!
Gurmuu hattuu fi Shirtuutiin “Baattoo Amala Wayyaanee” gaafa jennu lafaa kaanee miti. Amaluma wayyaaneetu irraa muldhata. Wayyaaneen kaleessa yoo rakkoo itti himan “Waatu duuba jira” jechuun dhugaa waakkata. Otuma dhugaa dhoksee rakkoo hin jirreef fala kijibaa kennuu galaafatame. Hardha ammoo hattuu fi shirtuutu sanitti jira. Dhiyeenya hannaa fi yakka jaraa irraa xinnoo himnaan “Waatu duuba jira” jechuun gidiraa ummataa kan samii fi ardiin beeku waakkatan. Boo’ichi ummataa jaratti sirba fakkaata! Leegaasii abbaa ofii cimsanii itti fufsiisutu kana gaafata!
Dhugaa waaqi fi lafti beeku! Ummata keenya tajaajiluuf malee ummatatti tajaajilamuuf hin qabsoofne! Duuba akkamitti waa nu duubaa dhabama? Hattuu fi raatuun kana hin beektu. Akkuma ofii nama seeti
Ee waatu nu duuba jira. Wanni sun ummata baldhaa isin saamaa fi saamsisaa boochiftan! Ummati hiyyeessi isin gabaasa sobaatiin quubsitan, kan bulchiinsa badaan darartan, kan nagaya dhoowwitanii rakkiftan, kan buqqaatii fi du’a isaallee himuu hanqattan, kan isin shiftaa itti gadhiiftanii ficcisiiftan, kan isin abbootii gadaa irraa ajjeeftanii fi kan isin bittaa qawweef jecha qarshii 600,000,000 irraa guurtanii dhoowwattan martuu nu duuba jira.
Ee waatu nu duuba jira! Wanni sun poolisii fi milishaa dha! Poolisii fi milishaan nagaya ummataaf jecha qooqa bulaa wareegama kanfalu hundatu nu duuba jira! Wanni sun qeerroo fi qarree dha! Goototi dhiiga fi lafeen jijjiirama fidan, kan jijjiirama ceesisuuf halkanii guyyaa hojjataa turanii fi kan isin filannoon dabarraan ofirraa dhiibdan martuu nu duuba jira. Wanni sun ijoollee biyya baraaruuf raayyaa ittisa biyyaa seente. Gootonni yaaddoo diigumsa biyyaa ittisuuf lubbuu ofii qabsiisanii duula bahan hooggansaa haga miseensaa nu duuba jiru.
Ee waatu nu duuba jira! Wanni sun hooggansa badhaadhinaa ti. Hooggansi badhaadhinaa kan ummata qananiitti ceesisuuf hirriiba malee ifaaju, kan rakkoo alaa fi keessaa qolatuuf cimee hojjatu, kanneen isin dhiibdanii moggaatti baaftan, kanneen isin shiraan rakkoo galchitan hundatu nu duuba jira. Wanni sun miseensota badhaadhinaa % 99 caalu. Miseensi badhaadhinaa warri yaadama Ida’amuu amanee badhaadhina hunda-galeessa milkeessuuf kutate cufatu nu duuba jira!
Ee waatu nu duuba jira! Wanni sun hayyoota fi qareeyyii fayyaaleyyii dha. Hayyooti gadadoo ummata keenyaa dhaabuu fi qananii lafa qabsiisuu barbaadan, kanneen bilisummaa.. wal-qixximmaa fi obbolummaatti amanan martuu nu duuba jiru. Wanni sun sabaaf sab-lammoota Itoophiyaa ti! Sabaaf sab-lammoonni obboleeyyan keenya, kanneen Itoophiyaa keessatti haqi, nageenyi waaraan, misoomni hunda-galeessi fi tokkummaa sab-daneessi akka dhugoomu fedhan martuu nu duuba jiru!
Dhugaaf jecha dhugaan hojjanna! Kanaafuu hunduu nu waliin jira. Kan nu waliin hin jirre hattuu fi shirtuu, baattoo amala wayyaanee qofa. Bineeyyii fi yaada-maleeyyiin sun ammoo baga nu waliin hin jiraatin! Galata Rabbiiti!
Galmi keenya badhaadhina hunda-galeessa! Akkaan Ida’amuutu achi nu geessa! Yeroon dhaqqabuuf gufuu Ida’amuu buqqisuu feesisa!
Via: Taye Dendea Aredo
Sirna Gadaa fi Abbootii Gadaa haa jabeessinu!!
Sirna Gadaa fi Abbootii Gadaa haa jabeessinu!! Abbootiin Gadaa kan yeroo rakkoo qofaa waammatanii miti;…
Foollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti Foolleen dargaggoota gannaa 16-24 keessa jiran.…
Tigray War News; TDF Defends Tigray From Invasion – Negotiations?